Nhau - Atlanta tsotsi murume akapfurwa ndokuurawa kunze kweEncore Hookah bar uye lounge
VERIFI inobatsira kusiyanisa pakati pechokwadi uye chenhema ruzivo nekupindura mibvunzo yako zvakananga. Kutsvaga "zvakabatana" zvemukati? Tarisa tsoka dzewebhu.
ATLANTA-Atlanta mapurisa akati Chishanu mangwanani kuti murume mumwe akapfurwa "kakawanda" uye wechipiri akabatwa akapfurwawo ruoko kunze kwedhorobha hookah bar mhiri kwemugwagwa kubva kuGeorgia Aquarium.
Sekureva kwaAPD Kapteni Dorian Graham, wekutanga kuurayiwa akaudza mapurisa kuti anga oda kusiya Encore Hookah Bar & Bistro paLuckie St. paakapfurwa nemotokari yaipfuura. Kufona kwacho kwaingova kwa3 mangwanani
Apo wechipiri akabatwa, anorondedzerwa semurume mukuru, akauya muchipatara, akarohwa nepfuti paruoko rwake, uye matikitivha aibvunzurudza wekutanga kubatwa. Akaudza vaongorori kuti akapfurwawo achisiya Encore
Inoenderana: Union City Mapurisa arikutsvaga "varume vane zvombo uye vane ngozi" varume vanodiwa pakuponda musikana ane nhumbu uye amai vane makore matanhatu
Mapurisa akataura kuti murume akapfurwa kanoverengeka akavaudza kuti anga asina kana kunetsana mubhawa, kana kumbopokana nemunhu angave akakonzera kupfura.
"Haana kana kuona mupfuti, akapfurwa paakangobuda mumba yekutandarira," akadaro Graham, mapurisa akaudzwa.
Mapurisa akati vari kutarisa makamera ekuongorora munzvimbo iyi kuyedza kuwana rumwe ruzivo nezve mota, iyo yavakatsanangura senge nhema nhema kana grey Dodge Charger.
Post nguva: Sep-06-2021